PSJTV | विप्लव बन्द : सडक सुनसान, ठाउँ–ठाउँमा बम
काठमाडौं : प्रतिबन्धीत नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले आज (मंगलबार) आह्वान गरेको नेपाल बन्दले देशभरका जनजिनव प्रभावित भएको छ । विप्लवले आह्वान गरेको बन्द सफल पार्न कार्यकर्ताले मुलुकको विभिन्न ठाउँमा बम र शंकास्पद वस्तु राखेका छन् ।
काठमाडौंको कीर्तिपुरमा मंगलबार बिहानै शंकास्पद वस्तु फेला परेको छ । शंकास्पद वस्तु भेटिएको ठाउँलाई अहिले नेपाली सेना र प्रहरीले घेरा राखेको छ भने जनजिवन प्रभावित भएको छ । सुरक्षाकर्मीले शंकास्पद वस्तु पहिचाहनको अनुसधन गरिरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै काभ्रेको बनेपा, धुलिखेल, र पनौतीमा पनि कुकर बम फेला परेको छ । बन्दलाई सफल पार्न विप्लव समूहका कार्यकर्ताले कुकर बम राखेका प्रहरीले जनाएको छ । तर, विप्लवका कार्यकर्ताले जनजीवन त्रसित पार्न राखेको बम नेपाली सेनाले बिहानै निस्क्रिय पारेको छ ।
झापा– भद्रपुरमा बम पनि मंगलबार बिहानै बम भेटिएको छ । बम विप्लव समूहका कार्यकर्ताले बन्दलाई लक्षित गरी राखेको हुन सक्ने सुरक्षाकर्मीले जनाएका छन् ।
यसैगरी बन्दको पूर्वसन्ध्यामा झापाको भद्रपुरस्थित भद्रपुर नगरपालिकाको कार्यालयभित्र एउटा झोलामा शंकास्पद वस्तु भेटिएको छ । प्रहरीका अनुसार नगरपालिकाका मेयरको कार्यकक्ष चढ्ने सिढीको तल कालो व्याग जस्तो शंकास्पद वस्तु फेला परेको थियो । उक्त शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाले निस्क्रिय गरेको छ ।
यसैगरी बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नं. ३ राजकोट पाण्डुपडेसको वडा कार्यालय भवनमा पनि बम भेटिएको समाचार प्राप्त भएको छ । तर, द नेपालटपकर्मी तेज बोहराले डीएसपीलाई फोन सम्पर्क गर्दा केही जानकारी नभएको बताए ।
यसैगरी बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नं. ३ राजकोट पाण्डुपडेसको वडा कार्यालय भवनमा पनि बम भेटिएको समाचार प्राप्त भएको छ । तर, द नेपालटपकर्मी तेज बोहोराले डीएसपीलाई फोन सम्पर्क गर्दा केही जानकारी नभएको बताए ।
त्यस्तै वीरगञ्जमा बन्दको कुनै प्रभाव नभएको द नेपालटपकर्मी नरेश सर्रफले जानकारी दिएका छन् । तर, वीरगञ्जबाट चल्ने लामो दूरीका सवारी साधन भने नचलेको उनले बताए ।